ClearFolders: ataovy mangarahara ny fiavian'ireo lahatahiry (Cydia) | Vaovao IPhone
Tato ho ato dia asehonay anao ny tweaks Cydia vitsivitsy izay ahafahanao manamboatra saika ny zava-drehetra ao amin'ny iOS 7. Fa, iza no tweaks mifanaraka amin'ny iOS 7? Tao amin'ny Actualidad iPad dia namorona rakitra manokana izahay (miaraka amin'i Google Docs) izay anaovanay ny fanangonana ireo fanitsakitsahana rehetra izay nohadihadianay ary mifanaraka amin'ny iOS 7.. Androany, ho fantatsika ny ClearFolders, fanitsiana avy any Cydia hahafahantsika manao mangarahara ny fandefasana volon'ireo iOS 7. Miankina amin'ny valinteny izay anananao dia ho tianao ny vokany bebe kokoa na latsaka. Aorian'ny fitsambikinana ny fampahalalana rehetra an'ny ClearFolders.
Fanaovana mangarahara ny fiavian'ireo lahatahiry amin'ny ClearFolders
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misintona ny ClearFolders avy any Cydia, tahaka ny ataonay amin'ireo tweak izay tianay hapetraka. Amin'ity indray mitoraka ity, ClearFolders dia eo amin'ny toeran'ny Modmyi.com (apetraka amin'ny toerana misy anao). Raha vantany vao alaina ny tweak dia tsy maintsy hamerina hamerina ny iPad ianao mba hamboarina tsara ny ClearFolders.
Avy hatrany, rehefa tonga ho azy ny iPad, ho hitanao ny fanovana nataon'ny ClearFolders tao amin'ny folder-nay. Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, tsy manana an'io toerana volondavenona io izay misy ny iOS 7 intsony ny lahatahiry, fa tsy manana fiaviany intsony izy ireo. Ity vokatra ity dia mety ho tena tsara amin'ny sary an-tsary sasany izay misy gradients na loko maivana; Na izany aza, Raha manana loko mainty isika, dia tsy ho hita loatra ny vokatr'i ClearFolders satria hieritreritra isika fa manana fiaviana mainty.
Na izany aza, mamporisika anao aho hametraka ClearFolders raha te hahita fivoahana vaovao manatsara ny famolavolana ny iOS 7 napetraka ao amin'ny iPad-nao ianao.
Fanazavana fanampiny - Fampiharana Cydia iPad mifanentana amin'ny iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » ClearFolders: ataovy mangarahara ny fiafaran'ny folder-nao (Cydia)
Eclipse: tweak hanatsarana ny "mode night" amin'ny iPhone (Cydia)